SSC NAPOLI VS LEIPZIG: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
(Napoli) 15 Feb 2018 – Waxaa caawa isku dheggan labada kooxood ee SSC Napoli vs Leipzig oo kala socda dalalka Talyaaniga iyo Jarmanka, isla markaana ciyaaraya lugta hore ee wareegga 32-ka EL.
Dhanka Napoli: Macallin Sarri ayaa doonaya inuu diiradda saaro horyaalka Talyaaniga oo uu ku hoggaaminayo dhibic caato ah, isagoo kaydka dhigaya Hamsik, Jorginho, Allan, Albiol iyo Mario Rui to the bench. Waxaa sidoo kale safka ka maqan Mertens, waxaana weerarka ka mid noqonaya Ounas oo garabka midig taagan.
Dhanka Leipzig: Kaddib laba bilood oo uu maqnaa waxaa kooxda reer Jarman usoo kabtay oo kaydka fadhiya Forsberg. Sabitzer iyo Demme ayaa hargabkii kasoo kabtay waxayna ciyaarta soo gelayaan isla daqiiqadda 1-aad.
22 SEPE, 6 MARIO RUI, 33 ALBIOL, 5 ALLAN, 8 JORGINHO, 17 HAMSIK, 74 GAETANO
28 MVOGO, 6 KONATE’, 27 LAIMER, 17 BRUMA 24 KAISER, 10 FORSBERG, 29 AUGUSTIN
XOG: Dallado Imaaraati & Ruush ah oo doonaya inay iibsadaan AC Milan!